Motorola Moto E6i: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
E nwere ihe a ọhụrụ ala-arụmọrụ ama na ahịa, na ọ bụ Motorola Moto E6i, nke na-abịa na gam akporo 10 Go Edition na ọnụahịa dị oke ọnụ maka oke ego.
Ama a nwere nkọwapụta teknụzụ dị ala na njedebe, ọ bụ ya mere eji eme ya maka ndị ọrụ na - achọ ihe dị ala. Otú ọ dị, ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, anyị na-ekwukwa banyere àgwà ya niile n'okpuru.
1 Njirimara na nkọwa nke Motorola Moto E6i
Njirimara na nkọwa nke Motorola Moto E6i
Maka ndị na-ebido, ngwaọrụ a abịa ihuenyo teknụzụ IPS LCD 6.1-inch na HD + mkpebi. Onye a nwere akara n'ụdị mmiri ozuzo na-echekwa ihe mmetụta igwefoto MPN 5 MP. N'aka nke ya, a na-akwado ya na osisi ọkụ na obere chin, nke a na-ahụkarị maka igwegharị na mpaghara a.
N'aka nke ọzọ, Motorola Moto E6i nwere nyiwe mkpanaka nke Unisoc Tiger SC9863A, chipset processor nke nwere isi asatọ ma na-arụ ọrụ na akara elekere kachasị nke 1.6 GHz. 2 GB Ram na 32 GB n'ime ime ohere, nke enwere ike ịgbasa site na kaadi microSD.
Batrị anyị hụrụ n'okpuru mkpuchi nke ọnụ ahịa a bụ 3.000 mAh ma ọ dabara na ọsọ ọsọ nke 10 W site na ọdụ ụgbọ mmiri microUSB.
Ekwentị azụ igwefoto usoro bụ sọrọ ma mejupụtara 13 MP bụ isi ihe mmetụta na 2 MP nke abụọ ihe mmetụta, ha abụọ na-ejikọ ya na ikanam flash. Diagonal to the modul, enwere agụ akara mkpisiaka. Akụkụ ndị ọzọ na-ekwu banyere jack jack nke 3.5mm.
Emeela Motorola Moto E6i na Brazil n'okpuru ọnụahịa gọọmentị nke 1.099 Brazil reais, nke ruru ihe dị ka euro 170 na ọnụego mgbanwe. Ọ na-abịa na titanium agba ntụ na agba pink, ọ nweghịkwa ụbọchị ntọhapụ maka mkpanaka maka ahịa ndị ọzọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ekpughere banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Motorola Moto E6i, mkpanaka ohuru nke ejiri gam akporo Go gaa maka uzo ntinye